I-Barbara House entsha sha ePisa
Ifulethi elilodwa elinethezekile lokulala lilungele labo abadinga ukuhlala eduze kweSibhedlela saseCisanello noma kulabo abafuna ukujabulela futhi bavakashele idolobha le-Tower. Esimeni samasu, eduze nomgwaqo omkhulu we-FI-PI-LI, onesitobhi sebhasi ngaphansi kwendlu ongakwazi ukufinyelela kuyo kalula isikhungo somlando. Kule ndawo kukhona zonke izinsiza ezifana nezitolo ezinkulu, izindawo zokucima ukoma, ogwayi, ama-pizzeria, ikhemisi namasinema. Ifakwe indawo yokupaka yangasese endaweni eqashwe amakhamera.
Ifulethi lilungiswe ngokuphelele kuzo zonke izici zalo kanye nokuqedwa.
4.88 ·202 okushiwo abanye
4.88 · 202 okushiwo abanye
Leli fulethi lisendaweni ethule, e-condominium phambi kwesibhedlela saseCisanello futhi lihlome ngazo zonke izinkonzo. Eduze kwakho ungathola amabha, ama-pizzeria, izitolo zikagwayi, isuphamakethe, i-multiplex cinema, ikhemisi, ibhange, iposi njll. njll.
Ukutholakala kwami sekuphelele, ngihlala imizuzu nje ukusuka efulethini, futhi ngitholakala kunoma yisiphi isidingo noma iseluleko nezikhombisi-ndlela mayelana nedolobha, izindawo ongavakashela kuzo, lapho ungadla khona kanye nezindlela ongafinyelela ngazo efulethini.
Yimina engizokwamukela mathupha lapho ufika kodwa kukhona ithuba lokuthi "zihlole wena ngokwakho" uma ngingekho noma izidingo zakho ezikhethekile.
Ukutholakala kwami sekuphelele, ngihlala imizuzu nje ukusuka efulethini, futhi ngitholakala kunoma yisiphi isidingo noma iseluleko nezikhombisi-ndlela mayelana nedolobha, izindawo…